ဟာသ Archives - Amawpyay
လူကြားထဲမဖတ်နဲ့နော် ရပ်ကွက်ထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က နှစ်ဆိုင် ၊ လမ်းတဖက်ခြား မျက်နှာချင်းဆိုင်….. တစ်ဆိုင်နဲ့ တစ်ဆိုင်က မတည့်ကြတော့ ဘောပွဲပြလည်း၊ အပြိုင် အဆိုင်၊ သီချင်းဖွင့်လည်း အပြိုင်အဆိုင်….. ဖောက်သည် လုရင်း ရန်ဖြစ်ကြတာကလည်း၊ ခဏ ခဏ.. တဆိုင်က ဗီဗာဟိန်းဆို တဆိုင်က မနော. . တဆိုင်က လေးဖြူဆို တဖက်က ဇော်ဝင်းထွဋ်. . အသီးသီး ဆောင်းဘောက်ကို အသားကုန်ဖွင့်ကြတော့ တဖက်ရပ်ကွက်ကပင် ကြားရ၏. .။ ဒီနေ့တော့ တဆိုင်ရဲ့ ချန်နယ်ကမြန်မာကား ပြနေပြီး တဆိုင်က တရားခွေဖွင့်ထားလေ၏. . “ရှင်နော် ကျယ်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပဲ ရမယ် ကျယ်မရဲ့ အချစ်ကို ဘယ်တော့မှ …
စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ထုတ်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရက်
စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ထုတ်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရက် “မိန်းမရေ … ကုတင်အောက်က စက္ကူ ပုံးကြီး လွှင့်ပစ်လိုက်တာလား … ” အမှန်က စက္ကူပုံးချည်းမဟုတ်ပါ … အထဲတွင် မိန်းမ မသိအောင် ခိုးခိုးကစ်ရသည့် အရက်ပုလင်းလက်ကျန်ကလေးရှိ၏ ။ ” ဂေ့စ် … ” ” ဂစ် … ” အခန်းထဲသို့ …ထဘီစွန်တောင်စွဲကာ ဝင်လာသဖြင့်… တစ်ခန်းလုံး အရက်နံ့များ မွှန်ထူသွားသည် ။ “ဟာ … မူးလာတာလား ” “ငါ့ပုံက မမူးတဲ့ပုံပေါက်နေလို့လား ဂေ့စ် ” ကိုယ်ကျိုးတော့နည်းပြီ … ငတိမက အကုန် သောက်လိုက်ပြီထင်၏ ။ …
ဇစ်မြစ်ကို လှန်ကြည့်သည် ကိုင်ကြည့်သည် လက်နဲ့နှိုက်ကြည့်သည်
ဇစ်မြစ်ကို လှန်ကြည့်သည် ကိုင်ကြည့်သည် လက်နဲ့နှိုက်ကြည့်သည် အသက် ၆၀ ကျော်လောက်ရှိသည့် အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ငြီးပြီး မီးယပ်အထူးကု (OG) ထံသို့ရောက်လာသည်။ “အမလေး ကျွတ်ကျွတ် နာလိုက်တာ သားလေးရယ် အမေကြီးကို ကြည့်ပေးပါအုံး..” ဆရာ၀န်မှ လှန်ကြည့်သည်။ ဘာမှမဖြစ် အားလုံးကောင်းသည် ။ “အမေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး..အားလုံး ကောင်းပါတယ်” အဒေါ်ကြီး ထပ်ငြီးသည်။ “အား အမလေး သေတော့မှာပဲ ကိုက်လိုက်တာ..” ဆရာ၀န်မှ ထပ်လှန်ကြည့်သည်။ ကိုင်ကြည့်သည်။ အားလုံးပုံမှန် ဘာမှမဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောသည်ကိုပင် မရ … အော်ပဲ အော်နေသည် “နာလိုက်တာ..ကယ်ပါ ဆရာရယ် ” ထပ်လှန်ကြည့်သည် ကိုင်ကြည့်သည် လက်နဲ့ နှိုက်ကြည့်သည် ဘာမှမဖြစ် …
အပျိုကြီးကုန်းရွာက မောင်လေးတွေကို သွားမရှုပ်ပါနဲ့လို့ မပြောခဲ့ဘူးလား အခုတော့ အပျိုကြီး ဘာဖြစ်သွားလဲ
အပျိုကြီးကုန်းရွာက မောင်လေးတွေကို သွားမရှုပ်ပါနဲ့လို့ မပြောခဲ့ဘူးလား အခုတော့ အပျိုကြီး ဘာဖြစ်သွားလဲ ဆိုးပါ့ကွယ်..အပျိုကြီးဘဝ (စလိုက်ဦးမည်) အပျိုကြီး – “Hi .. မောင်လေး” ကောင်လေး – “Hi Hi … မမ” အပျိုကြီး – “မောင်လေးက ဘယ်ကလဲဟင်။ ပလုံဖိုင်းပုံလေးကတော့ အလွင့်လေးနော့.. ခိ၊ အပြင်မှာရော ချောလား”( ရရာဆွဲ စပ်စု ရမှာပဲလေ ) ကောင်လေး – “ပရိုဖိုင်းပုံ အမှန်ပါ မမ” အပျိုကြီး – “လူချောလေးပဲ။ ဘယ်မှာ နေတာလဲ ဟင်”( ပုံကတော့.. ခိုက်စရာ။ ကံ ထလာပြီ ထင်ရဲ့ ခိ …
ကျူပ်ကိုမျှော်လင့်ပြီမနေပါနဲကျူပ်ကိုမျှော်လင့်ပြီမနေပါနဲ(ဟာသ ပုံပြင်) အသက်၄၀အရွယ်အပျိူကြီးတစ်ယောက် သီတင်းစာထဲ တွင် ကြော်ညာထည့်သည်…. အားကိုး အားထိုက် ရှိအပ်သော ခင်ပွန်းအလိုရှိသည်… ၁။အရက်မသောက်ရ ၂။ဆေးလိပ်မသောက်ရ ၃။ မိန်းမမလိုက်စားရ ၄။ဖဲမရိုက်ရ ၅။ အသက်၄၅ထက်မကြီးရ ၆။လူပျိူဖြစ်ရမည် အထက်ပါအချင်အလတ်များ နှင့်ပြည့်စုံပါက. အောက်ပါလိတ်စာ အတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ ••••• နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့မှာတံခါး လာခေါက်သည် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အရက်ကို အလွန်အကျွန် မူနေအောင် သောက်ထားသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ပါးစပ်တွင်ဆေးလိပ် ခဲထားသည်။ အပျိူကြီးက မေးလိုက်သည်- ဘာကိစ္စတုန်း? အာလေး ရှာလေးနဲ့ အမူးသမားက ပြန်ဖြေသည် ဒီလိုပါ ကျုပ်သီတင်းစာထဲမှာ ခင်ဗျား ကြော်ညာထားတာ တွေ့လို့ လာခဲ့တာပါ။ အပျိူကြီးက …
ကြက်သူခိုး လိုက်ဖမ်းသူနဲ့ ကလေးအိပ်တုန်း ခိုးစားကြရအောင်ဆိုတဲ့ လင်မယား တွေ့ကြသောအခါ
ကြက်သူခိုး လိုက်ဖမ်းသူနဲ့ ကလေးအိပ်တုန်း ခိုးစားကြရအောင်ဆိုတဲ့ လင်မယား တွေ့ကြသောအခါ သူခိုးဖမ်းမယ် “ကျနော်တို့ မခိုးရပါဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရယ်..” “ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေးပါ ကျမတို့ ဒါမျိုးအကျင့်လည်းမရှိရပါဘူးရှင်..” “ကဲ..ဟုတ်ပီ ကိုတင်လှ ခင်များကြက်ကို သူတို့လင်မယားခိုးပါတယ်လို့စွပ်စွဲရအောင် ခင်များ က ဘာအထောက်အထားနဲ့စွပ်စွဲရတာလဲ..” “ရှိပါတယ်ဆြာ.. အင်မတန်ကိုခိုင်လုံပါတယ် ဒီသတင်းက အတွင်းလူယုံကနေတဆင့်ပေါက်ကြားတာပါ ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ရပါဘူး..” အရေးထဲဒင်းကတမှောင့်ချဲ့ကားနေသေးတယ် “ကဲပါ လိုရင်းပဲပြောဗျာ ခင်ဗျားဘယ်လိုသိတာလဲ..” “အဟမ်း..ဒီလိုပါ မနေ့ညက ကျနော့် တိုက်ကြက်ဖကြီး အိပ်တန်းမဝင်တာနဲ့ကျနော်တစ်ညလုံး တိတ်တဆိတ်လိုက်လံပြီးလျို့ဝှက်စုံစမ်းပါတယ် ဒါပေမယ့် သတင်းအစအနတောင်မရခဲ့ပါဘူး..” “ဒါနဲ့များကွာ..” “အဲ ကျနော်စကား မဆုံးသေးပါဘူးဆြာ” “ကဲ ပြောဗျာ လိုရင်းကိုပြော..” “ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ့မယ် မနက်မိုးလင်းတော့ကျနော် အိမ်နီးနားဝန်းကျင်မှာ စုံစမ်းနေတုန်း သူတို့ရဲ့သား …
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုးိသမီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦၤး ည မှာ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယ …
KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မ.ရှက်.တမ်းပြောပြထားတဲ့ရင်ဖွင့်စကားများ(ရှက်.တတ်သူများမဖတ်ရ)
KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မ.ရှက်.တမ်းပြောပြထားတဲ့ရင်ဖွင့်စကားများ(ရှက်.တတ်သူများမဖတ်ရ) ပုခုံးတွေခါးတွေ ဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့ ခုကျွေးမလိုတော်ကြာကျွေးမလို မာယာများရတာပေါ့နော်….။ သစ္စာမေတ္တာဆိုတာ ကေတီဗီလောကမှာမရှိဘူး/ကေတီဗီ နွား“ဘိုးတော်ရောက်ပြီ”ဝိတ်တာလေးလာအော်တော့မှ ဘောင်းဘီတိုကောက်လဲ နူတ်ခမ်းလေး သပ်ရပ်အောင်ဆိုး ဆံပင်ကို se.xy ဖြစ်အောင်ဖွပြီး Room A7 ကိုသွားပြီ။ဒီနေ့တော့ ဘိုးတော်တစ်ပွေတည်း ဂေါက်မရိုက်ဖြစ်လို့ စောလာတာတဲ့လေ…ဘိုးတော်က ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ ထိုင်နေပြီ။အမှန်တော့ အာပလာကြီးဖြစ်နေပြီရယ်…ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကာစတမ်မာကို အပြုံးမပျက်ရဘူးလေ…သူ့အတွက် သောက်စရာ စားစရာမှာ… ကိုယ့်အတွက်ကျွဲရိုင်းနဲ့သီးစုံတစ်ပွဲပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း ဘိုးတော်ကရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ လေတွေစွတ်တိုက်နေပြန်တာ အခုပဲ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးတော့မှာလို နိူင်ငံခြားအလည်ခေါ်တော့မှာလိုကိုယ်တွေကလည်း ဒါမျိုးတွေရိုးလို့ရှင် ယုံချင်ယောင်တော့ ဆောင်ပြရတာပေါ့ရှင်စီးပွားရေးအောင်မြင်ကြောင်း ပင့်ပေးရတာပေါ့ရှင် ဘောလုံးပွဲလောင်းတာတော်ကြောင်း ဘုံမြှောက်ရတာပေါ့ရှငလူတိုင်းက ဒီနေရာရောက်လာရင် ဘောစိလို့ အထင်ခံရတာကို ဂုဏ်ယူကြတယ်လေကိုယ်တွေကတော့ သနားအောင်ဇာတ်ကွက်ဆင်ရတာပေါ့ ပထွေး နဲ့နေရတာတို့ မောင်နှမများတာတိုအမေနေမကောင်းတာတို့ …
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ်
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် မိန်းမတွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာနေပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်အခုကျ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တစ်ရက်မှာပဲ သိတောင် မသိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ်ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေခဲ့တဲ့ …